တရုတ်နိုင်ငံ Huo Ma Ren ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လျှော်စေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
Huo Ma Ren ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လျှော်စေ့
တရုတ်အမည်- huo ma ren
လက်တင်အမည်- Cannabis sativa L.
အပိုင်း- မျိုးစေ့ကို အသုံးပြုပါ။
အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်- Runchang Tongbian
လျှော်စေ့၊ တရုတ်ဆေးအမည်ဆေးခြောက် sativa L. ၏ ခြောက်သွေ့သော ရင့်ကျက်သော အစေ့များကို အရှေ့မြောက်၊ မြောက်တရုတ်၊ အရှေ့တရုတ်၊ အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်တရုတ်တို့တွင် ဖြန့်ဖြူးထားသည်။အူတွေကို စိုစွတ်စေပြီး ဝမ်းသွားခြင်းရဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။သွေးအားနည်းခြင်း၊ အူခြောက်ခြင်းနှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းများတွင် အသုံးများသည်။ထုတ်ကုန်သည် ဘဲဥပုံ၊4~ 5.5 မီလီမီတာ ရှည်လျားပြီး အချင်း 2.5 ~4မီလီမီတာ ဖြစ်သည်။မျက်နှာပြင်သည် စိမ်းပြာရောင် သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင် အဝါရောင်ရှိပြီး ဖြူစင်သော သို့မဟုတ် အညိုရောင် အကွက်များပါရှိသော၊ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် အစွန်းများ၊ ထိပ်တွင် အနည်းငယ်ချွန်ကာ၊ အောက်ခြေတွင် အသီးအညှာအဝိုင်းအမှတ်အသားရှိသည်။pericarp သည် ပါးလွှာပြီး ကြွပ်ဆတ်ပြီး ကွဲလွယ်သည်။Testa အစိမ်းရောင်၊ cotyledons 2၊ နို့ဖြူရောင်၊ အဆီကြွယ်ဝ။လေက အားနည်းပြီး အရသာက ပေါ့ပါးပါတယ်။
သွေးအားနည်းခြင်း၊ အူခြောက်ခြင်းနှင့် ဝမ်းချုပ်ခြင်းများတွင် အသုံးများသည်။
1. ပျို့အန်ခြင်း ကုသခြင်း- မဟင်ဆန်ဟီး ပြုတ်၊ ပေါင်၊ ဖျော်ရည်ကို ရေသောက်၊ ဆားလျှော့စားပါ (《ဆေးညွှန်းကောင်းပါ
2. မစင်စွန့်ခြင်းကို ကုသ၍မရသော လျှော်စေ့ကို ကြိတ်ချေပြီး ထမင်းမှုန့်ဖြင့် ထမင်းရည်အဆာပြေစားရန် (《အနောက်၊ တံတောင်ဆစ်
3. asthenia နှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ကုသခြင်း ၊ အောက်ပိုင်း energizer ၏ အပူဓာတ် ချို့တဲ့ခြင်း၊ နာကျင်သော အဆစ်များ ၊ အရေးတကြီး ကြွက်သားများ၊ ဆီးသွားခြင်း ၊ ဝမ်းအနည်းငယ်သာ ၊ ပါးစပ်ခြောက် ၊ Qi နည်းပါးခြင်း - လျှော်စေ့ ငါးမျိုး ၊ သုတေသန ၊ ရေနှစ်လီတာ ၊ တစ်ဝက်ခန့် ပြုတ် ၊ သီးခြား (ဝေ Tai Mi Yao)
4. မီးဖွားပြီးနောက် သွေးမဖြစ်အောင် ကုသခြင်း- ကျောက်တုံးငါးလီတာ ၊ ပေါင် ၊ တစ်ည ဝိုင်အစွန်းအထင်း တစ်ပုံး ၊ မင်ဒန် ၊ အနွေးထည် တစ်လီတာ ၊ ပထမ အစားအစာ ၊ အဖုမပေါက်အောင် ၊ ညအိပ်ယာဝင် တစ်လီတာ ၊တစ်လအတွင်း လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ပဏာမပါရာဥပဒေအဖြစ် မြှင့်တင်မည် (《ရွှေဆေးစာတစ်ထောင် (မာဇီဝိုင်))
ဆောင်းဦးတွင် အသီးအနှံများကို မှည့်သောအခါတွင် ရိတ်သိမ်းရပြီး အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပြီး နေပူတွင် အခြောက်ခံပါသည်။
အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပြီး အခွံခွာပါ။
ယခင်- Ji Nei Jin ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ
နောက်တစ်ခု: Gao Liang Jiang တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ လက်ကား Alpinia Officinarum
Shi Hu Factory Supply High Quality Hot Sale နတ်...
He Huan Pi အရည်အသွေးမြင့် တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ...
pu huang အခမဲ့နမူနာဆေးဖက်ဝင်အပင်ခြောက် typh...
Wu Wei Zi 100% သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ သစ်သီး Dr...
Long Dan Cao သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်ခြောက် Radix...
Du Zhong လက်ကားဆေးဘက်ဝင်အပင်များ Eucommiae Foli...